Migraine ngokungafani nezifo eziningi zalezi zinsuku, eyaziwa isikhathi eside kakhulu. Izimpawu ezichazwa yamaSumer asendulo kanye uHippocrates futhi u-Avicenna, KaCelsus. Igama elithi "migraine" by aguqulayo ezilimini ezihlukahlukene babevela igama lesiGreki "hemicrania".
Migraine, esibonakala by neziqubu ezinzima throbbing ikhanda, Ephakathi libhekisela kulokho okubizwa ngokuthi izifo zasebukhosini. Kukholakala ukuthi kwakungase kuphela kube ngayo phakathi kwabantu ehlakaniphe okusezingeni eliphezulu nomsebenzi okukhulu kwengqondo. Nge migraine wayazi Ludwig van Beethoven, Yuliy Tsezar, uCharles Darwin, u-Alfred Nobel, uFrederic Chopin, gi de Mopassan, Fridrih Nitsshe, u-Anton Pavlovich chehov nabanye abantu abadumile. amadoda kuphela! Futhi akumangalisi, ngoba ngaleso sikhathi zesayensi kanye elite okudala umphakathi. Laba besifazane babengoFakazi ikakhulukazi Homemakers. Kodwa, njengoba kufakazelwa izibalo yesimanje, namuhla isimo kuhluke ngokuphelele: inkinga ezitholakele abesifazane kaningi kunabantu, izikhathi 2.
Indlela aphathe migraine?
Migraine kubangela neziqubu ikhanda, ngezinye izikhathi kunezinye izimpawu ezifana isicanucanu, ukuhlanza. Ngo abesifazane, lesi sifo ngokuvamile uhlanganiswa Ukungadli hormone ocansini. Ubufakazi lokhu yokuthi izimpawu migraine kwabesifazane (60%) kuvele kuqale nomjikelezo wokuya esikhathini. Isizathu esikhulu lesi sifo ubhekwa sitholwa njengefa.
Kunemithi ezimbalwa ezikusiza ukuvimbela ukuhlaselwa migraine noma inciphe izimpawu zaso.
Okokuqala lawa analgesics abavamile, isibonelo, kusho "paracetamol" futhi "aspirin".
Badinga ukuthatha ngokushesha nje izimpawu zokuqala a migraine. Uma ikhanda inzima, njengoba umthetho, thatha imithi sekwephuzile. Kulokhu, impendulo kuphela elungile umbuzo ukuze kwelashwe migraine, yilesi: zama ukulala athule egumbini mnyama.
Yokuvimbela izimpawu migraine Kunconywa omdala isiphuzo 3 izibhebhe ukulungiselela "aspirin" (900 mg) noma 2 amaphilisi nemithi "paracetamol" (1000 mg). Ngemva 4 amahora kungenzeka ukuphinda analgesic reception.
Iqembu kwemishanguzo elwa migraine yesibili - amaphilisi ezinhlungu kuyinto izidakamizwa eqeda ukuvuvukala ukuthi ziyasebenza nakakhulu. Lezi zihlanganisa izidakamizwa ezilandelayo: "ibuprofen", "diclofenac", "naproxen" futhi tolfenamic acid.
Ngenxa migraine ngezinye izikhathi kubangela ukucanuzela kwenhliziyo noma ukuhlanza, ngisho ukuthatha amalungiselelo equkethe izingxenye antiemetic futhi izinzwa, isibonelo, Migraleve, Paramax, MigraMax.
Ekugcineni, kukhona iqembu lesine izidakamizwa. Lona ikhambi migraines - triptans. Bona ukucindezela ikhanda. Lezi zihlanganisa lokhu okulandelayo: "Naratriptan", "Almotriptan", "frovatriptan," "sumatriptan", "rizatriptan", "Zolmitriptan". Triptans uxhumana serotonin zemizwa ubuchopho, okungukuthi, ukulungiswa kwalezi receptor futhi abangele migraine. Le mithi akufanele kuthathwe ekuseni kakhulu, kuphela uma ikhanda, noma bamane ngeke zisebenze.
Indlela esiphatha ngayo migraine wendabuko imithi
Abantu ngaleso ekwelapheni migraine usebenzisa ukusikwa okunamandla ikhanda futhi efudumele unyawo okugeza, licindezele kuya ngiyaqaqanjelwa ikhanda, futhi batusa ukuphuza iziphuzo ezishisayo in inqwaba.
Migraine kusiza nekufakwa marjoram: 300 amagremu yamanzi abilisiwe thatha 1 tbsp utshani. Ngalokhu-ke ihora elingu-1 elicwengekileyo. Phuza ukumnika izikhathi 3 ngosuku ingilazi.
Umhluzi kusuka peppermint uzilungiselele kanje: 1/2 tbsp Mint wathela amanzi abilayo (1 inkomishi) kanye evuthayo phezu okugeza amanzi imizuzu okungenani engu-15, avunyelwe ahlale imizuzu 45. Thatha ngaphambi kokudla izikhathi 3 ngosuku amasonto amabili.
Migraine usizo lezo zinqubo: i ephefumula ingxube ammonia kanye camphor utshwala ezingxenyeni alinganayo, ukwamukelwa kwenkolelo-eshaweni Ngokuphambene namabhati ashisayo ezandleni nasezinyaweni, oyisithobo zika-anyanisi eluhlaza noma sauerkraut (kungcono ukusebenzisa emathempelini noma ngemuva ezindlebeni).
Nokho, ngemva ulwazi sendlela yokuphatha amakhambi migraine abantu, kufanele ishiwo izakhiwo ezuzisayo ikhofi, ngoba i-caffeine kuye kwaba nomphumela omuhle ku lonke isimiso sokujikeleza kwegazi futhi kusiza ekudambiseni ubuhlungu bekhanda.
Vagus ezinzwa - nokwakheka zokugula kwezinye
Ukunambitheka ababayo emlonyeni: izimbangela kanye nokwelashwa amakhambi abantu
Moscow Okunhlobonhlobo Theatre: poster, amakhadi, izithombe kanye nokubuyekeza
Uyini tariff ugesi for labantu e Belarus